Parabaik အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Parabaik အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Parabaik အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂
၁၅:၀၄ ၁၅:၀၄၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၃၂၉‎ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ‎No edit summary
၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂
၁၇:၂၉ ၁၇:၂၉၊ ၂၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၂၈၅‎ ကော်ဖီ ‎No edit summary
၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀
၁၇:၄၀ ၁၇:၄၀၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၂၀‎ ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:Font ‎ →‎မ​တူ​ညီ​ခြင်း​
၁၈:၁၄ ၁၈:၁၄၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၀‎ ဧရာဖောင့် ‎No edit summary
၀၆:၅၇ ၀၆:၅၇၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ‎No edit summary
၀၆:၅၆ ၀၆:၅၆၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၈‎ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ‎No edit summary
၀၆:၅၃ ၀၆:၅၃၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၁၄‎ အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ‎No edit summary
၀၆:၅၀ ၀၆:၅၀၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၂၇၆‎ အသစ် အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ‎ စာမျက်နှာအသစ်: ===အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်=== အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ထိခိ...
၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
၁၆:၀၃ ၁၆:၀၃၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉၁‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:ဇာမဏီ ‎No edit summary
၁၅:၅၂ ၁၅:၅၂၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉၃‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Battoe19 ‎No edit summary
၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
၁၆:၁၄ ၁၆:၁၄၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၄၂‎ ယဉ်ကျေးမှု ‎No edit summary
၁၆:၁၂ ၁၆:၁၂၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ ကချင်လူမျိုး ‎ →‎အခြားလူမျိုးများ
၁၆:၀၄ ၁၆:၀၄၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဆွေးနွေးချက်:ဇော်ဂျီဖောင့် ‎ Talk:Zawgyi Unicode မှ​ Talk:Zawgyi Font သို့​: Zawgyi font didn't follow any unicode standards. It is only font.
၁၆:၀၄ ၁၆:၀၄၊ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဇော်ဂျီဖောင့် ‎ Zawgyi Unicode မှ​ Zawgyi Font သို့​: Zawgyi font didn't follow any unicode standards. It is only font.
၅ ဩဂုတ် ၂၀၀၉
၁၀:၅၂ ၁၀:၅၂၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၃‎ ထူးအိမ်သင် ‎No edit summary
၁၀:၅၁ ၁၀:၅၁၊ ၅ ဩဂုတ် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁၄၇‎ ထူးအိမ်သင် ‎No edit summary
၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
၀၈:၅၂ ၀၈:၅၂၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅၄‎ အသစ် အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ko Toe Gyi ‎ စာမျက်နှာအသစ်: Hello Ko Toe Gyi, Could you kindly use it (http://myanmaritpros.com/forum/topic/show?id=1445004%3ATopic%3A145414) for converting zawgyi to unicode. Thanks. ~... လက်ရှိ
၀၈:၄၉ ၀၈:၄၉၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇‎ ဆွေးနွေးချက်:နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ) ‎No edit summary
၀၈:၄၈ ၀၈:၄၈၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၁၈‎ အသစ် ဆွေးနွေးချက်:နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ) ‎ စာမျက်နှာအသစ်: old texts stored by zawgyi; so I converted it. ~~~~~
၀၈:၄၇ ၀၈:၄၇၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆‎ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ) ‎No edit summary
၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၂၂:၄၁ ၂၂:၄၁၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၉၇‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Jimbo Wales ‎No edit summary
၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၁၅:၅၄ ၁၅:၅၄၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဖိုင်:Myanmar Wikipedia Issues.pdf ‎ uploadedanew version of "Image:Myanmar Wikipedia Issues.pdf": It's our situation and issues on Myanmar Wikipedia. လက်ရှိ
၁၅:၂၁ ၁၅:၂၁၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Jimbo Wales ‎No edit summary
၁၅:၂၀ ၁၅:၂၀၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၀‎ အသစ် ဖိုင်:Myanmar Wikipedia Issues.pdf ‎ It's issues on Myanmar Wikipedia. my.wikipedia.org
၀၈:၄၁ ၀၈:၄၁၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈၃‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Jimbo Wales ‎No edit summary
၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၁၃:၄၀ ၁၃:၄၀၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၀၆‎ အသစ် အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Jimbo Wales ‎ New page: Hi Jimbo Wales I'm Ngwe Tun from Myanmar. I'm attending Wikimania 2008. Shall we discuss Myanmar Unicode Fonts issues right away? ~~~~
၀၇:၁၁ ၀၇:၁၁၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၅‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၀၄:၁၅ ၀၄:၁၅၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၅‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၀၄:၁၅ ၀၄:၁၅၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၆၇‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၀၄:၀၇ ၀၄:၀၇၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄၈‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၁၀:၁၅ ၁၀:၁၅၊ ၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅‎ စာလုံးပုံစံ ‎No edit summary
၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈
၁၇:၅၇ ၁၇:၅၇၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂၁‎ ဝီကီပီးဒီးယား:Font ‎No edit summary
၁၇:၄၆ ၁၇:၄၆၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၇၄‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၁၇:၄၅ ၁၇:၄၅၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၈၉‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၁၇:၂၄ ၁၇:၂၄၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆၅၄‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၁၃:၀၇ ၁၃:၀၇၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၇၆‎ ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for adminship ‎ →‎(+) Support
၁၁:၁၁ ၁၁:၁၁၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၀၈‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kyawgyi ‎No edit summary
၀၆:၀၀ ၀၆:၀၀၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅‎ စာလုံးပုံစံ ‎No edit summary
၀၅:၅၉ ၀၅:၅၉၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၃၃‎ အသစ် စာလုံးပုံစံ ‎ New page: စာလုံးပုံစံများကိုရယူရန် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နေရာများတွင်ကူးယူ...
၀၅:၃၄ ၀၅:၃၄၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၁၁‎ ဆွေးနွေးချက်:ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
၀၂:၁၀ ၀၂:၁၀၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၁၆‎ အသစ် အသုံးပြုသူ:Parabaik ‎ New page: I'm Ngwe Tun, from Union of Myanmar. I'm being worked for Burmese Localzation effort since 2003. I just want to share what I've done in Myanmar Localizatin. I'm very welcome any question r... လက်ရှိ
၀၂:၀၉ ၀၂:၀၉၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၅၃၈‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Parabaik ‎No edit summary
၀၂:၀၂ ၀၂:၀၂၊ ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၈ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၅၂‎ ဝီကီပီးဒီးယား:Requests for adminship ‎ →‎(-) Oppose
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
၁၈:၂၃ ၁၈:၂၃၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃၈‎ ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:Font ‎ →‎Available fonts
၁၈:၀၉ ၁၈:၀၉၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၆၆‎ အကူအညီ:မာတိကာ ‎No edit summary
၁၈:၀၀ ၁၈:၀၀၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၉၀‎ ဗဟိုစာမျက်နှာ ‎No edit summary
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Parabaik" မှ ရယူရန်